စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း | Layma's World
« ဒဿ and the Beast ၂၀၀၈ ကိုမျက်နှာသစ်ပေးလိုက်တယ် »
ကြယ်ပြာ, on December 29, 2008 at 2:42 am said:
လေးမစိတ်ကူးယဉ်ထားတာလေးဖတ်ရတာ သဘောကျတယ် …..
THS, on December 29, 2008 at 3:22 am said:
အင်္ဂါဂြိုလ်ကို သွားခဲ့ကြတာ ပျော်စရာကြီး 🙂
နောက်တစ်ခါသွားရင်တော့ မျက်နှာမသစ်တဲ့သူ ၊ ရေမချိုးတဲ့သူတွေကို ရေချိုး မျက်နှာသစ်ခိုင်းပြီးမှ ခေါ်သွားပါဗျို့ 😛 😛 😛
မွန်, on December 29, 2008 at 4:36 am said:
သားကြွက်, on December 29, 2008 at 9:56 am said:
အမယ်…တယ်ဟုတ်ပါလား အင်္ဂါဂြိုလ် ခရီးစဉ်က ပျော်စရာကြီးလူစုံတက်စုံနဲ့ ။ ဗလကြီးပါရင် ဘာမှမပူအရှေ့ဆုံးက ရန်သူဆိုတာနဲ့ပြေးတော့ 😛 ရေချိုးပါတယ် တစ်နေ့ကို ၃ ခါတောင်ချိုးတာ တကယ်ကြီးပြောတာ နားတဲ့ ယင်ကောင်ကို ကိုကြီးပန်နဲ့ရောစားလိုက်တယ် ဟဲဟဲ ဆြာ တို့အတွဲကို မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့ တနားပါတယ် ။ပဲဟင်းကို သတိရတယ် ရေမချိုးတဲ့သူမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုတင့် မရာဟုနဲ့သွားတိုင်မယ် ဗိုက်ဆွဲလိမ်အောင် ။ နယူးမှာ ကလီးယားဆို ကြောက်တယ် ပြေးပြီး ကြောင်စီးပြီး ကြွက်တိုင်းပြည်ကို 🙂
ပိစိ, on December 29, 2008 at 3:11 pm said:
မုန့်တော့ဝယ်ကျွေးဝူးးး နာမည်ယူသုံးတဲ့အတွက် ပြန်ဝယ်ကျွေး… ဟီးးး
မုန့်ဖိုးတောင်းဖို့.. 😛 😛
nhn, on December 29, 2008 at 4:14 pm said:
nhn, on December 29, 2008 at 4:24 pm said:
nu-san, on December 29, 2008 at 7:45 pm said:
လေးမရေ.. ရေးထားတာ ရီလိုက်ရတာ.. အမ အခု ဟင်းချက်ရင်း ဖတ်နေတာ.. အစ်ကိုက လွှတ်ပါတယ်လေးမရယ်.. အင်္ဂါဂြိုလ်က ပြန်မလာရင်လေ ပိုကြိုက်လိမ့်ဦးမယ်.. နားပူတာ သက်သာတယ် ပြောရတာ သက်သာတယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့.. 😀
mtj, on December 29, 2008 at 10:01 pm said:
ဟာာာာ…. ကလေးတွေ ကိုကိုတွေ ဘာတွေလဲ… မောင်မျိုးတော့ နာတော့မယ် ( နိုင်သူကိုမဲတာ 😀 )
ShwunMi, on December 29, 2008 at 10:54 pm said:
အင်္ဂါဂြိုလ်ကို အလည်သွားရတာ ပျော်စရာ 🙂
မီက ပြန်ရောက်တော့ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ .. 😉
နေ့အိပ်မက်, on December 30, 2008 at 4:54 am said:
ခွိခွိ.. ရယ်ရတယ်… မမတအားတော်တာပဲ၊ တကယ်မိုက်တယ်….. နောက်တစ်ခါ… လကမ္ဘာမှာ သွားနေရအောင်… ရေမချိုးတဲ့သူတွေ.. ပိုးသတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးမှ လိုက်ရမယ်လို့………. 😛 😛
သက်ဝေ, on December 30, 2008 at 9:39 pm said:
မီးကိုတော့ ခေါ်ဘူးပေါ့… ဟင့်.. ဟင့်..
ညိမ်းညို, on December 30, 2008 at 9:44 pm said:
ပျော်စရာခရီးစဉ်ထဲ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်အစ်မလေးမရေ 🙂
ကိုသင်္ကြန်ကြီးက မောင်မျိုးကို ဘာလို့ ကြိမ်းနေတာတုန်း နားလည်ဝူးးး 😛
SoeMoe, on January 1, 2009 at 10:05 am said:
မမ..စိတ်ကူးယဉ်တာကောင်းမှကောင်း..ဖတ်လို့ .. 😛
MhawSayar, on January 1, 2009 at 7:02 pm said:
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ 1st year တုန်းက စီနီယာတွေ လုပ်တဲ့ မုန့်စစ်ရေးပြ ခေါ်မလား. မုန့် Parade ခေါ်မလား. အဲဒီမှာ ရောမွေထားတဲ့ မုန့်စုံတွေကို စားခဲ့ရတာ သွားသတိရတယ်. 🙂
ဝေလေး, on January 12, 2009 at 10:16 pm said:
ဝေလေးလည်းပါဘူး….. လို့…. တွေးမိလိုက်တာ
အောက်ဆုံးစာကြောင်းဖတ်မိမှ….. သြော်…. ဂလိုကိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်… 😀